मधेसी महिलाहरु तिज नमनाउने, तर किन ??? « Mazzako Online
मधेसी महिलाहरु तिज नमनाउने, तर किन ???
काठमाडौ, २९ भदौ ।
संयूक्त लोकतान्त्रिक मधेसी महिला मोर्चा आबद्ध महिलाहरुले नेपाली महिलाहरुको महान पर्व तिज नमान्ने भएका छन् । मधेसमा आन्दोलनकारीको हत्या पछि समाज सोकाकुल बनिरहेको अवस्थामा पर्व मनाउन नसक्ने भन्दै नमनाउने निर्णय गरेको हो ।
मोर्चाले सोमबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गरेर मधेसमा निर्मम दमन सहित राज्य पक्षबाट हत्या भईरहेको, महिला बालवालिकामाथि दुब्र्यवहार र मानसिक यातना दिने काम भईरहेकोले त्यस्तो कार्य तत्काल रोक्न समेत माग गरिएको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा महिला नेतृहरु चन्दा चौधरी, रेखा यादव, राधा कायस्थर विनिता यादवले धेरै मधेसी महिलाहरुको सिउदो पुछिएको अवस्थामा खुसी मनाउन नसक्ने भएकोल तिज बहिस्कार गर्नु परेको बताए । उनीहरुले मधेसी जनताले आफ्नो जायज माग अघि बढाईरहँदा राज्य कानमा तेल हालेर बसेको भन्दै तत्काल माग पुरा गर्न आग्रह गरे । उनीहरुले मधेसमा परिचालित सेना तत्काल फिर्ता गरेर शान्तिपूर्ण आन्दोलनको अधिकार सुनिश्चित गर्न माग गरे ।